ငယျခဈြဦးနဲ့လှဲခဲ့သူမြား မဖတျရ - ApannPyay Media
September 23, 2021 by ApannPyay Media
ကလေးဘဝကိုပွနျလှမျးမယျဆိုပွီး စဉျးစားတော့ အခဈြဦးကိုတနျးပွနျသတိရတာပါပဲ။ ကြှနျတျောတို့တှဟော ဘာကောငျကွီးတှမှေမဟုတျပဲ အခဈြဦးအတှကျဆို သူရဲကောငျးကွီးအဖွဈရှိခငျြခဲ့ကွတယျ။
ကလေးဘဝကိုပွနျသှားတာနဲ့အခဈြဦးဆိုတာကလညျး ဇာတျလမျးတဈပုဒျရဲ့ ဇာတျဝငျခနျးတဈခုလိုပါပဲ။ အခဈြဦးလို့သုံးတာက Crush ဆိုတဲ့စကားကိုကလေးဘဝကမသိခဲ့သေးတာရော Crush တယျဆိုတာထကျပွီးမွတျနိုးခဲ့မိတာကွာငျ့ရောပါ။
ကြှနျတျောတို့အားလုံးနှဈသကျပွီး ပွနျတမျးတကွတဲ့အဖွူစိမျးကြောငျးသားဘဝမှာဆို မနကျမိုးလငျးလို့ကြောငျးရောကျတာနဲ့ ကိုယျ့အဖှဲ့လေးနဲ့ကိုယျ ကလေးတို့သဘာဝဆော့မယျ ကစားမယဒီလိုနဲ့အခြိနျကုနျတတျခဲ့ကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့အခဈြဦးဆိုတဲ့ကောငျမလေးက စိနျပွေးတမျးကစားနသေလား ကွိုးခုနျနသေလား ဇယျခုပျနသေလားဆိုတာကိုလညျး စိတျဝငျတစားလိုကျကွညျ့ခဲ့ကွဖူးမှာပါ။ အခါအခှငျ့သငျ့တာနဲ့ သူကစားနတေဲ့ ဝိုငျးထဲမှာ ကိုယျပါဝငျခှငျ့ရဖို့အသငျ့ရှိနခေဲ့ကွဖူးတယျမလား
ကြှနျတေျာ့အခဈြဦးဆို သူတအားဆော့တာက အဝတျကိုမကျြလုံးမှာစညျးပွီး လကျနဲ့လိုကျပုတျတဲ့ကစားနညျး။ အဝတျစညျးထားတဲ့သူရဲ့ လကျနဲ့ထိမိသူက သူ့နရောကိုဝငျယူပွီး နောကျတဈယောကျကိုလိုကျဖမျးရတော့တာပဲ။
ကြှနျတျောဆို သူခှေးရူးဖွဈတာနဲ့ သူ့အနားသှားအသံပေးပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုခှေးရူးအဖွဈခံခဲ့ဖူးတယျ။ဘယျအခြိနျမှာဖွဈဖွဈ သူငယျခငျြးဆိုတဲ့အဖွူရောငျစညျးဘောငျလေးထဲကနေ သူ့အတှကျအသငျ့ရှိနခေဲ့ဖူးတယျဆိုပါတော့၊
ကြောငျးပထမဆုံးဖှငျ့ရကျ အတနျးပိုငျဆရာမကအသငျးတှခှေဲတဲ့အခါ သူနဲ့အသငျးတူတူကဖြို့လညျး ကြှနျတျောတော့ အမြိုးမြိုးကွိုးစားခဲ့ဖူးတယျ။အခဈြဦးနဲ့အသငျးအတူတူဖွဈရတဲ့အခါ ရတဲ့အခှငျ့ရေးက နညျးမှ မနညျးပဲဗြ။
စာသငျခြိနျမှာမကျြနှာခငျြးဆိုငျအနထေားနဲ့ တဈခုံတညျးထိုငျရတယျ။ပွီးတော့ ကိုယျ့အသငျးတာဝနျကရြကျဆို ကြောငျးကိုအစောကွီးလာမယျ ။ သူကဘာတာဝနျလဲ အသငျးခေါငျးဆောငျကိုမေးမယျ။
သူက ရခေပျရမှာလား ကြှနျတျောကဦးအောငျခပျပေးထားလိုကျတယျ။ သူက တံမွကျစညျးလှဲရမှာလား ကြှနျတျောကဦးအောငျလှဲပေးထားလိုကျတယျ။သူက အမှိုကျကြုံးရမှာလား ကြှနျတျောက ဦးအောငျကြုံးပေးထားလိုကျတယျ။
သူကြောငျးရောကျလို့ သူ့တာဝနျတှပွေီးတဲ့အခါ သူပြျောနတောလေးကိုကြှနျတျောသဘောကတြယျ။သူဘုရားပနျးတငျဖို့ ပနျးလေးဝယျလာတိုငျး ဘုရားပနျးအိုးကိုအရငျစှနျ့ပွီး ကြှနျတျောအသငျ့ပွငျထားပေးခဲ့ဖူးတယျ။
သူဝယျလာတဲ့ ဘုရားပနျးလဲပွီး ဘုရားကိုပွနျကပျတဲ့အခါ သူမ အားကိုးတကွီးအကူညီတောငျးတဲ့သူဟာ ကိုယျဖွဈနရေငျ ဘယျလောကျမြားပြျောစရာကောငျးလဲ….
ပွီးတော့ ဘုရားပနျးပွနျကပျတဲ့အခါ ဘာမှနျးမသိတဲ့ဖူးစာဆိုတာကို သူနဲ့ပါဖို့အတှကျ ဘုရားကိုတိုးတိုးကလေးနဲ့ အပူကပျခဲ့ဖူးတယျ။
ကြောငျးဆငျးခြိနျအိမျပွနျကွတော့လညျးဘာထူးလဲ သူစကျဘီးထုတျတဲ့အခါ အလှယျတကူဖွဈအောငျ သူ့စကျဘီးဘေးနားက အခွားဘီးတှကေိုကွိုရှငျးပေးထားခဲ့ဖူးတယျ။
တဈခါတဈလဆေိုကြှနျတျော သိပျညဈပတျတာ၊သူ့ဘီးကိုလလြေော့ထားပွီး သူလာမှသတိပေး ကိုယျတိုငျလိုကျတှနျးပေးပွီး လပွေနျထိုးပေးခဲ့သေးတာ။
ဘာပဲပွောပွော သူအသိမှတျပွုတာလေးကိုကြှနျတျောကနြေပျနတောမြိုးလဗြော…သူနဲ့ကြှနျတျောကတဈရပျကှကျထဲဗြ။ အိမျပွနျတဲ့လမျးတဈလြှောကျလညျး သူနဲ့မတူတူအောငျ သူပွနျတဲ့လမျးက လိုကျပွနျတယျ။
တခွားကောငျလေးတှသေူ့နားကပျမယျ့ အရိပျယောငျတှတေ့ာနဲ့ ကြှနျတျော အရငျကပျပွီး စကားတှကွေံဖနျရှာပွောခဲ့ဖူးတယျ။သူအိမျလမျးထဲ သူဝငျသှားပွီဆိုမှ ကြှနျတျောလမျးကို ကြှနျတျောလှညျ့ပွနျခဲ့တာမြိုး။
တဈခါတဈလေ သူ့အဖကေဆိုငျကယျနဲ့လာကွိုတဲ့ရကျမြိုးမှာဆို 110 Loujia ဆိုငျကယျကို ကြှနျတျောရဲ့တရုတျစကျဘီးလေးနဲ့အမှီနငျးပွီး သူ့မွငျအောငျအားထုတျခဲ့သေးတာ။
သူမ မသိတဲ့ သူမရဲ့သူရဲကောငျးကွီးအဖွဈ ကိုယျ့ကိုယျကိုတာဝနျပေးပွီး ဂုဏျယူခဲ့ရခြိနျတှပေေါ့ဗြာ၊ဒါပမေယျ့လညျး အခညျြးနှီးတှပေါပဲ။ အထကျတနျးကြောငျးသားဘဝ ကြူရှငျတှေ ဝိုငျးတှေ ဘျောဒါတှပွေိုငျလာတဲ့အခါ ဓနရှငျတှရေဲ့ပညာရေးအသိုငျးဝိုငျးကို ကြှနျတျောမှ လိုကျမပွိုငျနိုငျခဲ့တာ။
ရှဈတနျးနှဈမှာ သူကကြောငျးပွောငျးတယျ။ပွီးတော့နာမညျကွီးဘျောဒါတဈခုမှာတကျတယျ။ ကြှနျတျောက ရပျကှကျထဲကြူရှငျတဈခုမှာ ဘယျသူမှမဖတျတဲ့ကဗြာတှရေေးပွီး အသညျးတှထေိုငျကှဲနခေဲ့ဖူးတယျ။
ဆယျတနျးနှဈကြ သူအိမျကိုပွနျလာတယျ။ ဘျောဒါမှာမနဘေဲ အပွငျဝိုငျးတှလေိုကျတကျဖို့တဲ့။ ကြှနျတျောက စာမတျောပမေယျ့ ဝီရိယသိပျကောငျးတယျ။
မနကျအစောကွီးငါးနာရီထတယျ သူသှားမယျ့စာသငျဝိုငျးလမျးမှာသှားကွိုစောငျ့တယျ။ ပွီးတော့လိုကျပို့တယျ။ ဒါပမေယျ့အဝေးကနပေါပဲ။ သူကတော့သိမှာလညျး မဟုတျခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ဆယျတနျးတှပွေီးကွတော့ သူကရနျကုနျမှာ ပုဂ်ဂလိကတက်ကသိုလျတဈခုသှားတကျတယျ။ ကြှနျတျောကနယျမှာကနျြခဲ့တယျ။ အခဈြဦးဟာ လူတိုငျးနဲ့လှဲတယျဆိုတဲ့စကားကို ကြှနျတျောသိပျမုနျးတယျ။
ရှဈတနျးနှဈကနေ စလှဲသှားတဲ့ ကောငျမလေးဟာ အခုဆို ဘှဲ့တှရေလို့ အလုပျတှတေောငျဝငျနပွေီ။ ကြှနျတျောနဲ့ကတော့လှဲနတေုနျးပဲ၊Back to childhood တဲ့ကြှနျတျောလညျးအမှတျတရတှေ သိပျရေးခငျြတာနဲ့ တှေးမိခဲ့တယျ။
သတိရမိတာကလညျး ဝေးခဲ့ရတဲ့အခဈြဦးပဲ။ အပွနျအလှနျမခဈြခဲ့ကွပမေယျ့ ထာဝရအခဈြဦးလို့တော့သုံးခှငျ့ရှိတယျမလား၊Facebook တှခေတျေစားလာတော့ သူ့အကောငျ့လေးကိုကြှနျတျော အပျမိသေးတယျ။
နှဈတှအေကွာကွီးစောငျ့ရကြိုးနပျပါတယျ။ အကောငျ့လကျခံပွီးသိပျမကွာဘူး သူ့အတှကျရေးတဲ့ကဗြာလေးဖတျပွီး ကြှနျတေျာ့ကို ဘလော့သှားလရေဲ့ ၊ဟုတျပါတယျ….။
ကြှနျတျောတို့အားလုံးထဲကတခြို့တဈဝကျဟာ အခဈြဦးနဲ့လှဲခဲ့သူခညျြးပါပဲ…။ မပေါငျးဖကျရတဲ့ဇာတျလမျး နီးစပျခှငျ့မရှိတဲ့ဇာတျလမျးတှကေိုမှ အမွဲတမျးတမိနတေဲ့ကလေးဘဝရဲ့ အမှတျတရအခြို့ပေါ့ဗြာ။
ကလေးဘဝကိုပြန်လွမ်းမယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားတော့ အချစ်ဦးကိုတန်းပြန်သတိရတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဘာကောင်ကြီးတွေမှမဟုတ်ပဲ အချစ်ဦးအတွက်ဆို သူရဲကောင်းကြီးအဖြစ်ရှိချင်ခဲ့ကြတယ်။
ကလေးဘဝကိုပြန်သွားတာနဲ့အချစ်ဦးဆိုတာကလည်း ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုလိုပါပဲ။ အချစ်ဦးလို့သုံးတာက Crush ဆိုတဲ့စကားကိုကလေးဘဝကမသိခဲ့သေးတာရော Crush တယ်ဆိုတာထက်ပြီးမြတ်နိုးခဲ့မိတာကြာင့်ရောပါ။
ကျွန်တော်တို့အားလုံးနှစ်သက်ပြီး ပြန်တမ်းတကြတဲ့အဖြူစိမ်းကျောင်းသားဘဝမှာဆို မနက်မိုးလင်းလို့ကျောင်းရောက်တာနဲ့ ကိုယ့်အဖွဲ့လေးနဲ့ကိုယ် ကလေးတို့သဘာဝဆော့မယ် ကစားမယဒီလိုနဲ့အချိန်ကုန်တတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်အချစ်ဦးဆိုတဲ့ကောင်မလေးက စိန်ပြေးတမ်းကစားနေသလား ကြိုးခုန်နေသလား ဇယ်ခုပ်နေသလားဆိုတာကိုလည်း စိတ်ဝင်တစားလိုက်ကြည့်ခဲ့ကြဖူးမှာပါ။ အခါအခွင့်သင့်တာနဲ့ သူကစားနေတဲ့ ဝိုင်းထဲမှာ ကိုယ်ပါဝင်ခွင့်ရဖို့အသင့်ရှိနေခဲ့ကြဖူးတယ်မလား
ကျွန်တော့်အချစ်ဦးဆို သူတအားဆော့တာက အဝတ်ကိုမျက်လုံးမှာစည်းပြီး လက်နဲ့လိုက်ပုတ်တဲ့ကစားနည်း။ အဝတ်စည်းထားတဲ့သူရဲ့ လက်နဲ့ထိမိသူက သူ့နေရာကိုဝင်ယူပြီး နောက်တစ်ယောက်ကိုလိုက်ဖမ်းရတော့တာပဲ။
ကျွန်တော်ဆို သူခွေးရူးဖြစ်တာနဲ့ သူ့အနားသွားအသံပေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွေးရူးအဖြစ်ခံခဲ့ဖူးတယ်။ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့အဖြူရောင်စည်းဘောင်လေးထဲကနေ သူ့အတွက်အသင့်ရှိနေခဲ့ဖူးတယ်ဆိုပါတော့၊
ကျောင်းပထမဆုံးဖွင့်ရက် အတန်းပိုင်ဆရာမကအသင်းတွေခွဲတဲ့အခါ သူနဲ့အသင်းတူတူကျဖို့လည်း ကျွန်တော်တော့ အမျိုးမျိုးကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်။အချစ်ဦးနဲ့အသင်းအတူတူဖြစ်ရတဲ့အခါ ရတဲ့အခွင့်ရေးက နည်းမှ မနည်းပဲဗျ။
စာသင်ချိန်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားနဲ့ တစ်ခုံတည်းထိုင်ရတယ်။ပြီးတော့ ကိုယ့်အသင်းတာဝန်ကျရက်ဆို ကျောင်းကိုအစောကြီးလာမယ် ။ သူကဘာတာဝန်လဲ အသင်းခေါင်းဆောင်ကိုမေးမယ်။
သူက ရေခပ်ရမှာလား ကျွန်တော်ကဦးအောင်ခပ်ပေးထားလိုက်တယ်။ သူက တံမြက်စည်းလှဲရမှာလား ကျွန်တော်ကဦးအောင်လှဲပေးထားလိုက်တယ်။သူက အမှိုက်ကျုံးရမှာလား ကျွန်တော်က ဦးအောင်ကျုံးပေးထားလိုက်တယ်။
သူကျောင်းရောက်လို့ သူ့တာဝန်တွေပြီးတဲ့အခါ သူပျော်နေတာလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။သူဘုရားပန်းတင်ဖို့ ပန်းလေးဝယ်လာတိုင်း ဘုရားပန်းအိုးကိုအရင်စွန့်ပြီး ကျွန်တော်အသင့်ပြင်ထားပေးခဲ့ဖူးတယ်။
သူဝယ်လာတဲ့ ဘုရားပန်းလဲပြီး ဘုရားကိုပြန်ကပ်တဲ့အခါ သူမ အားကိုးတကြီးအကူညီတောင်းတဲ့သူဟာ ကိုယ်ဖြစ်နေရင် ဘယ်လောက်များပျော်စရာကောင်းလဲ….
ပြီးတော့ ဘုရားပန်းပြန်ကပ်တဲ့အခါ ဘာမှန်းမသိတဲ့ဖူးစာဆိုတာကို သူနဲ့ပါဖို့အတွက် ဘုရားကိုတိုးတိုးကလေးနဲ့ အပူကပ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ကျောင်းဆင်းချိန်အိမ်ပြန်ကြတော့လည်းဘာထူးလဲ သူစက်ဘီးထုတ်တဲ့အခါ အလွယ်တကူဖြစ်အောင် သူ့စက်ဘီးဘေးနားက အခြားဘီးတွေကိုကြိုရှင်းပေးထားခဲ့ဖူးတယ်။
တစ်ခါတစ်လေဆိုကျွန်တော် သိပ်ညစ်ပတ်တာ၊သူ့ဘီးကိုလေလျော့ထားပြီး သူလာမှသတိပေး ကိုယ်တိုင်လိုက်တွန်းပေးပြီး လေပြန်ထိုးပေးခဲ့သေးတာ။
ဘာပဲပြောပြော သူအသိမှတ်ပြုတာလေးကိုကျွန်တော်ကျေနပ်နေတာမျိုးလေဗျာ…သူနဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ရပ်ကွက်ထဲဗျ။ အိမ်ပြန်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လည်း သူနဲ့မတူတူအောင် သူပြန်တဲ့လမ်းက လိုက်ပြန်တယ်။
တခြားကောင်လေးတွေသူ့နားကပ်မယ့် အရိပ်ယောင်တွေ့တာနဲ့ ကျွန်တော် အရင်ကပ်ပြီး စကားတွေကြံဖန်ရှာပြောခဲ့ဖူးတယ်။သူအိမ်လမ်းထဲ သူဝင်သွားပြီဆိုမှ ကျွန်တော်လမ်းကို ကျွန်တော်လှည့်ပြန်ခဲ့တာမျိုး။
တစ်ခါတစ်လေ သူ့အဖေကဆိုင်ကယ်နဲ့လာကြိုတဲ့ရက်မျိုးမှာဆို 110 Loujia ဆိုင်ကယ်ကို ကျွန်တော်ရဲ့တရုတ်စက်ဘီးလေးနဲ့အမှီနင်းပြီး သူ့မြင်အောင်အားထုတ်ခဲ့သေးတာ။
သူမ မသိတဲ့ သူမရဲ့သူရဲကောင်းကြီးအဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာဝန်ပေးပြီး ဂုဏ်ယူခဲ့ရချိန်တွေပေါ့ဗျာ၊ဒါပေမယ့်လည်း အချည်းနှီးတွေပါပဲ။ အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝ ကျူရှင်တွေ ဝိုင်းတွေ ဘော်ဒါတွေပြိုင်လာတဲ့အခါ ဓနရှင်တွေရဲ့ပညာရေးအသိုင်းဝိုင်းကို ကျွန်တော်မှ လိုက်မပြိုင်နိုင်ခဲ့တာ။
ရှစ်တန်းနှစ်မှာ သူကကျောင်းပြောင်းတယ်။ပြီးတော့နာမည်ကြီးဘော်ဒါတစ်ခုမှာတက်တယ်။ ကျွန်တော်က ရပ်ကွက်ထဲကျူရှင်တစ်ခုမှာ ဘယ်သူမှမဖတ်တဲ့ကဗျာတွေရေးပြီး အသည်းတွေထိုင်ကွဲနေခဲ့ဖူးတယ်။
ဆယ်တန်းနှစ်ကျ သူအိမ်ကိုပြန်လာတယ်။ ဘော်ဒါမှာမနေဘဲ အပြင်ဝိုင်းတွေလိုက်တက်ဖို့တဲ့။ ကျွန်တော်က စာမတော်ပေမယ့် ဝီရိယသိပ်ကောင်းတယ်။
မနက်အစောကြီးငါးနာရီထတယ် သူသွားမယ့်စာသင်ဝိုင်းလမ်းမှာသွားကြိုစောင့်တယ်။ ပြီးတော့လိုက်ပို့တယ်။ ဒါပေမယ့်အဝေးကနေပါပဲ။ သူကတော့သိမှာလည်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ဆယ်တန်းတွေပြီးကြတော့ သူကရန်ကုန်မှာ ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်တစ်ခုသွားတက်တယ်။ ကျွန်တော်ကနယ်မှာကျန်ခဲ့တယ်။ အချစ်ဦးဟာ လူတိုင်းနဲ့လွဲတယ်ဆိုတဲ့စကားကို ကျွန်တော်သိပ်မုန်းတယ်။
ရှစ်တန်းနှစ်ကနေ စလွဲသွားတဲ့ ကောင်မလေးဟာ အခုဆို ဘွဲ့တွေရလို့ အလုပ်တွေတောင်ဝင်နေပြီ။ ကျွန်တော်နဲ့ကတော့လွဲနေတုန်းပဲ၊Back to childhood တဲ့ကျွန်တော်လည်းအမှတ်တရတွေ သိပ်ရေးချင်တာနဲ့ တွေးမိခဲ့တယ်။
သတိရမိတာကလည်း ဝေးခဲ့ရတဲ့အချစ်ဦးပဲ။ အပြန်အလှန်မချစ်ခဲ့ကြပေမယ့် ထာဝရအချစ်ဦးလို့တော့သုံးခွင့်ရှိတယ်မလား၊Facebook တွေခေတ်စားလာတော့ သူ့အကောင့်လေးကိုကျွန်တော် အပ်မိသေးတယ်။
နှစ်တွေအကြာကြီးစောင့်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ အကောင့်လက်ခံပြီးသိပ်မကြာဘူး သူ့အတွက်ရေးတဲ့ကဗျာလေးဖတ်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ဘလော့သွားလေရဲ့ ၊ဟုတ်ပါတယ်….။
ကျွန်တော်တို့အားလုံးထဲကတချို့တစ်ဝက်ဟာ အချစ်ဦးနဲ့လွဲခဲ့သူချည်းပါပဲ…။ မပေါင်းဖက်ရတဲ့ဇာတ်လမ်း နီးစပ်ခွင့်မရှိတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုမှ အမြဲတမ်းတမိနေတဲ့ကလေးဘဝရဲ့ အမှတ်တရအချို့ပေါ့ဗျာ။